Halatra lavanila :: Polisy dimy lahy sy zandary iray nosamborina teny Anosy • AoRaha
Halatra lavanila Polisy dimy lahy sy zandary iray nosamborina teny Anosy
Nosamborin’ny polisy misahana ny heloka bevava na BC, eny Ampefiloha, ireo polisy miisa dimy sy zandary iray nanomboka afak’omaly ary mbola nitohy omaly. Voarohirohy tamin’ny halatra lavanila milanja 31kg izy ireo.
Samy nanao sonia taratasy fahazoan-dalana manenjika azy ireo avokoa na ny minisitry ny Filaminam-bahoaka, ny Contrôleur général Rafanomezantsoa Roger na ny Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena, ny jeneraly Ravalomanana Richard. Hatolotra ny Fitsarana izy enin-dahy ireo, anio.
Niainga tamin’ny varotra lavanila ity raharaha ity, tamin’ny 13 septambra lasa teo. Nilaza ho mahita mpividy ireo lavanila efa voakarakara milanja 31kg an’olona iray ireo mpitandro filaminana. Tany am-boalohany voalaza fa milanja 13kg ireo lavanila ireo. Rehefa tena nandeha anefa ny serasera teo amin’ireo mpitandro filaminana mahita mpividy sy ny tompon’ny entana dia tafiakatra 31kg izany.
Tonga ny fotoana nifanarahana hanaovana ny varotra. Nifanao fotoana teny Anosy ireo mpitandro filaminana sy ny lehilahy iray niaraka tamin’ireo lavanila. Minitra vitsy taorian’izay dia tsy hita ireo olona nilaza ho mahita mpividy miaraka tamin’ireo lavanila. Nametraka fitoriana avy hatrany teny amin’ny Fitsarana ilay lehilahy tompony. Nandefa taratasy manome baiko ny BC hanao famotorana ny lehiben’ny Fampanoavana.
Voasambotra ny vehivavy roa tamin’io fotoana io. Naiditra am-ponja izy ireo. Voalaza fa mpanelanelana ireo mpitandro filaminana sy ny tompon’ny entana izy roa ireo. Nitohy ihany ny famotorana ka izao niafara tamin’ny fisamborana ireo polisy miisa dimy sy zandary iray izao.
Miasa eny Betongolo io zandary kilasy voalohany voapanga tamin’ity raharaha ity izao. Tezitra mafy ny jeneraly Ravalomanana Richard raha vao naheno ny vaovao. “Tsy fieren-jiolahy ny Zandarimaria fa izay mandika lalàna dia hatolotra ny Fitsarana. Havoakako haingana mihitsy ny taratasy fahazoan-dalana manenjika ireny zandary manao hadalana ireny”, hoy izy.
“Efa tenenina foana ny polisy rehetra hanao tsara ny asany manaraka ny lalàna. Fotoanan’ny fiovana izao. Anatin’ny fanadiovana anatiny ny Polisim-pirenena. Tanjona ny hiverenan’ny fahatokisan’ny vahoaka », hoy kosa ny Contrôleur général Rafanomezantsoa Roger.
Lozam-pifamoivoizana :: Mpianatra enina naratra tamin’ ny fivadihana fiara